गृह मन्त्रालयको घेराबन्दीमा ‘विप्लव’ प्रहरीको गोप्य रिपोर्ट फेल ! - गृह मन्त्रालयको घेराबन्दीमा ‘विप्लव’ प्रहरीको गोप्य रिपोर्ट फेल !
गृह मन्त्रालयको घेराबन्दीमा ‘विप्लव’ प्रहरीको गोप्य रिपोर्ट फेल !
२०७५, १५ भदौ, 05:00:08 AM
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई धरपकड तथा पक्राउ गरिरहेको सुरक्षा निकायको ध्यान पछिल्लो समय महासचिव विप्लव तर्फ परेको छ ।
उनलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो परिचालन गरिएको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार विप्लवलाई पक्राउ गर्न भन्दै प्रहरीको जम्बो टोली केही दिनअघि सिन्धुपाल्चोकको एक जंगलमा पुगेको थियो । तर, प्रहरीको गोप्य रिपोर्ट फेल भएपछि उनलाई पक्राउ गर्ने योजना भने विफल भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
गृह मन्त्रालयले विप्लव र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका शिर्ष नेताहरुलाई पक्राउ गर्न छुट्टै बजेटकै व्यवस्था गरेको छ । शान्ति सुरक्षा शिर्षकमा ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
केही महिना अघि दाङमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा विप्लवलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेपनि पार्टी कार्यकर्ता र युवाहरुको सहयोगमा उनले घेराबन्दी तोड्न सफल भएका थिए ।
‘महासचिव कमरेड अहिले घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ । सुरक्षा निकायले जुन सुकै बेला पक्राउ गर्ने देखिन्छ । मैले थाहा पाए अनुसार १ हप्ता भित्र पक्राउ गर्ने योजना छ रे,’ नेकपाका एक शिर्ष नेताले भने,‘उहाँ अहिले हाम्रो समेत सम्पर्कमा छन् ।’ विप्लवले ६४ वटासम्म सिम फेरेको समेत सुरक्षा निकायको रिपोर्ट छ ।
‘उनी बलिदान दिन परेपनि देश भित्रै बलिदान दिने तयारीमा छन् । तर, कुनै वैदेशिक शक्तिको सामु नझूक्ने र भारत लगायत देशमा छिपेर नबस्ने उहाँको बचन छ,’ शिर्ष नेताले भने,‘हामीले निर्णय नै गरेर भारत लगायत अन्य देशमा नजाने भएका छौँ ।’
सुरक्षा निकायले विप्लवलाई पक्राउ गर्नका लागि विशेष अभियान नै चलाएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
‘गृहमन्त्रीकै निर्देशन अनुसार छिटै उनलाई नियन्त्रणमा ल्याउने हाम्रो तयारी हो,’ विप्लवलाई खोजी गरिरहेका एक अधिकारीले भने,‘उनी केही हप्तादेखि परिवारको समेत सम्पर्कमा छैनन् ।’
यता विप्लवको परिवारसँग उनी १४ दिनदेखि सम्पर्कमा छैनन् । ‘उनी हाम्रो सम्पर्कमा नआएको १४ दिन जति भयो । उनलाई चौतर्फी घेराबन्दी छ,’ एक पारिवारिक सदस्यले भने,‘फरक राजनीतिक आस्था राखेकै आधारमा यो सम्मको अन्याय हाम्रो परिवारमाथि गरिएको छ । यसको जवाफ समयले दिनेछ ।’
प्रकाण्डको पेनड्राइभ भित्रको महत्वपूर्ण डकुमेन्ट प्रहरी कब्जा !
यता केही दिनअघि अदालत परिसरबाट पटक पटक पक्राउ परिरहेका दोस्रो बरियताका नेता तथा प्रवक्ता खड्क बहादुर विश्वकर्माको साथमा रहेको ३२ जिबीको पेन ड्राइभ पनि प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको छ ।
‘उनको पेन ड्राइभमा पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय थियो । एकिकृत क्रान्तिको खाका नै त्यहाँ थियो,’ एक नेताले भने,‘पेन ड्राइभ फाल्ने क्रममा प्रहरीका एक सिपाहीले देखेपछि त्यो पेनड्राइभ विशेष ब्युरोमा पुगेको छ । त्यो अध्ययन भइरहेको होला ।’
को–को पक्राउ परे ?
नेकपाका शिर्ष नेताहरु अधिकांश प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले दोस्रो बरियताका नेता खड्क बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई हेटौँडाबाट काठमाडौं आउने क्रममा दक्षिणकालीबाट पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेलगत्तै नेकपाले गत साउन २९ गते नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो । यता सर्वोच्च अदालतले उनलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, प्रहरीले सर्वोच्च अदालत परिसर भित्रै मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको गाडीबाटै जबरजस्ती पक्राउ गरी काभ्र पुर्याएको थियो । यता उनका परिवारका सदस्यले बन्दिप्रत्यीक्षिकरणको मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले पुन ः थुनामुक्त गर्दै प्रहरीले लगाएको सबै आरोपहरु झूटो भएको ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश लगत्तै उनलाई फेरी अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरी नुवाकोट लगिएको छ । पुन परेको बन्दि प्रत्यक्षीकरण रिट अन्तर्गत प्रकाण्डलाई २४ घण्टा भित्र अदालत ल्याउन आदेश दिएपनि सरकारी विदा परेको कारण आईतबार उनलाई अदालत ल्याइँदैछ ।
त्यस्तै विप्लव निकट मानिने पोलिट ब्युरो सदस्य मोहन कार्की जीवन्त, कृष्ण धमला लगायत नेताहरुलाई राजधानीको नागढुङ्गाबाट पक्राउ गरेर काभ्रे लगिएको छ । उनीहरुलाई सामान्य मानविय व्यावहार समेत नभएको भेट्न आउनेहरुसँग गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै पोलिट ब्युरो सदस्यहरु ओम प्रकाश पुन्, पदम राई, केन्द्रीय सदस्यहरु, किरण राई, दिपेश राई, टेक बहादुर केसी र देव नारायण शाह प्रहरी हिरासतमै छन् ।
यता १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा गोरखा जेल ब्रेककी कमाण्डर उमा भूजेल पनि केही दिनअघि पक्राउ परेकी छिन् ।
यो समाचार आजको दियो पोष्ट अनलाइन प्रकाशित छ ।